တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က Chang’e-5 ခရီးစဉ်အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာပေးပို့ - Xinhua News Agency
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း "အစိမ်းရောင်လမ်း"အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂေဟစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲလာ
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် လမျက်နှာပြင်ပေါ်မှ ပထမဆုံး နမူနာပစ္စည်းများကို စုဆောင်းရယူပြီး အမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော Chang’e-5 အာကာသခရီးစဉ် အောင်မြင်မှုအပေါ် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ပြုကြောင်း သဝဏ်လွှာတစ်စောင်ကို ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ (CPC) ကိုယ်စား တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်ရှင်(CMC) ၊ CPC ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်သူ ရှီက Chang’e-5 ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများအားလုံးအား ကြည်သာရွှင်ပြ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါကြောင်းနှင့် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း သဝဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ပေးပို့သောဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာကို တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဝမ်းယန် က ပေကျင်းမြို့လေကြောင်းပျံသန်းရေးထိန်းချုပ်စင်တာ၌ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ဖတ်ကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရှုပ်ထွေးဆုံး အာကာသခရီးစဉ်စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Chang’e-5 ခရီးစဉ်သည် လမျက်နှာပေါ်မှ နမူနာပစ္စည်းများကို ပထမဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်စွာ ယူဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။ ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာစနစ်သစ် ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်စေရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများ အားလုံး၌ နောက်ထပ်ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် လကမ္ဘာ၏ မူလအရင်းအမြစ်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သိရှိနားလည်စေရန် နှင့် နေစကြဝဠာစနစ်၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသမိုင်းဝင် ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မှတ်ကျောက်တင်လောက်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ စွမ်းပကားဟာ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက် အမြဲထာဝရ အမှတ်ရနေစေမှာပါ” ဟု ရှီက ဆိုသည်။
အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် အဆုံးသတ်နေရာရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး Chang’e-5 ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများအနေဖြင့် အိပ်မက်များကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လကမ္ဘာစူးစမ်းလေ့လာရေးကို ရှေ့ဆက်တိုးတက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ စူးစမ်းရှာဖွေမှု ၊ အခက်အခဲများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိုဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့ကြောင့် စကြဝဠာအတွင်း စူးစမ်းလေ့လာမှုအသစ်ကို စတင်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံအား အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးတွင် အဓိက အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သွေးသစ်လောင်းခြင်း ၊ လူသားမျိုးနွယ်ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းနှင့်အတူ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးပြုခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာကို တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဝမ်းယန်က ပေကျင်းမြို့ရှိ ပေကျင်းလေကြောင်းပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
Chang’e-5 အာကာသခရီးစဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လမျက်နှာပြင်ပေါ်မှ နမူနာပစ္စည်းများကို စုဆောင်းခြင်း ၊ လကမ္ဘာမှ ပထမဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်း ၊ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အာကာသယာဉ်နှင့်ပထမဆုံးပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်း ၊ လဂြိုဟ်ပတ်လမ်းပေါ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် လမျက်နှာ နမူနာပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်၍ ကမ္ဘာမြေလေထုထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့် ပထမဆုံးအာကာသယာဉ် ဖြစ်ခြင်း တို့ပင်ဖြစ်သည်။
Chang’e-5 အာကာသခရီးစဉ်အောင်မြင်မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော လကမ္ဘာစူးစမ်းလေ့လာရေးစီမံကိန်း၏ အပြီးသတ်မှုပင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Dec. 17 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Thursday congratulated the complete success of the Chang’e-5 mission that brings back the country’s first samples collected from the moon.
Phot caption (1) Photos caption – (1,2,3) Staff members work at the landing site of the return capsule of China’s Chang’e-5 probe in Siziwang Banner, north China’s Inner Mongolia Autonomous Region, on Dec. 17, 2020.(Xinhua/Ren Junchuan)
(2) Chinese State Councilor Wang Yong readsacongratulatory message from Chinese President Xi Jinping at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, Dec. 17, 2020. (Xinhua/Zhang Ling)
Chang’e-5 အာကာသယာဉ်၏ လမျက်နှာပြင်မှ နမူနာပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသောအစိတ်အပိုင်း ပေကျင်းမြို့တော်သို့ ရောက်ရှိ
မြန်နှုန်းအလယ်အလတ်နှင့်မြန်နှုန်းနိမ့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် သံလိုက်ရထားသစ် တစ်မျိုး တရုတ်နိုင်ငံက တီထွင်ထုတ်လုပ်